दाजु विदेशमा, घरमा सबै सुतेपछि भाउजु आउनुहुन्थ्यो, बच्चा होला भन्ने थाहा थिएन ! – Online Saptarangi
October 19, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on दाजु विदेशमा, घरमा सबै सुतेपछि भाउजु आउनुहुन्थ्यो, बच्चा होला भन्ने थाहा थिएन !
कैलाली । केही घटनाले भाउजु आमा समान हुन्’ भन्ने युक्तिलाई केबल उखान मात्रमा सिमित गरिदिन्छ । र पत्याउनै नसकिने घटना हुन्छन् । कैलालीका एक किशोरको बयानले सबैलाई अचम्बित पारेको छ । उनको बयानले माथी उद्धारण गरिएका शब्दलाई मिथ्या सावित गरेको छ ।
आमालाई जस्तो सम्मान गर्नुपर्ने आफ्नै भाउजु देवरबाट गर्भवती भइन् । त्योपनि दाजु विदेश गएका बेला । घटनाले त्यति बेला पुष्टि पायो जतिबेला भाउजुको पेटमा हुर्किदै गएको बच्चा बढेर पेटको आकारमा बृद्धि भयो । प्राप्त जानकारी अनुशार कैलालीको लम्कीमा एक १८ वर्षीय देवरले भाउजुलाई गर्भवती बनाएका हुन्।
दाजु विदेश गएको मौका पारी देउवरसँग भाउजुको हिमचिब बढ्दै जान्छ । घटना बाहिर आएपछि उनीहरुको बयानले सबैलाई चकित बनाएको छ । किशोरले भने जब राति सबै जना निदाइसक्थे भाउजु म कहाँ आउनुहुन्थ्यो । यसो गर्दा बच्चा बस्छ भन्नेपनि मलाई थाहा थिएन । मेरो बेला भएकै छैन की जस्तो लाग्थ्यो ।
श्रीमान विदेश गएको एक वर्ष पछि उनकी भाउजु गर्भवती भएकी थिइन्। गर्भवती भएकी ती महिलाले लाजै पचाएर ससुरालाई पेट सुनियो भनी झुट्टो बोलेर उपचारको बाहनामा अस्पताल गएपछि गर्भवती भएको रहस्य खुलेको हो। उनका श्रीमान् रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया छन्।
श्रीमान् नभएको मौकामा ती महिलाले कान्छा ससुराका कान्छा छोरा देवरसँग सम्बन्ध कायम गरेकी थिइन्। महिलाले देवरबाटै गर्भवती भएको दावी गरेपछि ससुराले बुहारीलाई घरमा नराख्ने बताएका छन्। देवरलेपनि भाउजुसँग सम्बन्ध कायम भएको स्वीकार गरेका छन् ।
ती महिलाले देवरलाई घरमै बोलाएर सम्बन्ध कायम गरेको पनि स्वीकार गरेकी छिन्। दुबै परिवारले उनीहरुको व्यबहार नै शंकास्पद रहेको बताएका छन् । बच्चा हुर्किसकेकाले अब उनलाई जन्म दिनुको विकल्प उनीहरुसँग बाँकी छैन । यसैले अहिले देवर र भाउजुलाई गाउँलेले मिलेर जिम्मा लगाएका छन् ।
विषय प्रहरीसम्म पुगेको छ । प्रहरीले सहमतिमा नै सम्बन्ध कायम गरेको दुवैले स्वीकार गरेपछि र उजुर बाजुर नगर्ने एकसाथ बस्ने सहमति भएपछि मिलापत्र बनाउँने तयारी गरेको छ । तर किशोरको उमेर सानो भएकाले निगरानी राख्ने भएको छ ।
धनकुटा घटनामा नयाँ रहस्य बाहिरियो, छिमेकीहरुले दिए यस्तो अचम्म लाग्दो बयान (भिडियो हेर्नुस्)
नायिका सुहाना थापाले सार्वजनिक गरिन यस्ता तस्बिर। मोहित पार्ने रूप, फिदा बनाउने फिगर…..(२५ तस्बिर सहित)
October 5, 2020 Prakash Waiba